Seerayaasha Afrika waxay la dagaallamaan ugaarsiga iyada oo ay jirto cudurka faafa ee COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Seerayaasha Afrika waxay la dagaallamaan ugaarsiga iyada oo ay jirto cudurka faafa ee COVID-19
News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
La dagaalanka ugaadhsiga
Faafida COVID-19 waxay dhalisay kororka ugaadhsiga Afrika oo dhan iyada oo ilaaliyayaasha duurjoogta ay ku fidsan yihiin xadka, taasoo qaylo-dhaan iyo walaac ku abuurtay dadka u ololeeya iyo kuwa ilaaliya.
Baadhitaan ay samaysay hay'ad samafal oo dhiirrigelisa ilaalinta, Tusk iyo Natural State, ayaa lagu ogaaday in ilaaliyaasha Afrika aysan arag wax gargaar ah.
Ugaadhsiga ayaa dhab ahaantii sii kordhaya iyada oo masiibada COVID-19 ay sii waddo saamaynta bulshooyinka Afrika iyo duur-joogta.
Sahanku wuxuu su’aal geliyay 60 urur oo ka dhisan 19 dal oo Afrika ah.
Sanduuqa Ilaalinta iyo Duurjoogta ee Beerta Qaranka ee Hwange, Zimbabwe, ayaa sheegtay inay aragtay 8,000% kororka dabinnada iyo dabinnada intii u dhexeysay May iyo Luulyo 2020.
“Waxaa jiray koror aad u weyn oo ah xadhigga la xiriira fool-maroodiga ee ay kooxdeennu sameeyeen sannadkii la soo dhaafay. Ugaaratadu ma nasan doonto in kasta oo uu jiro masiibada, sidaa darteed annaga ayay nagu jirtaa inaan sii wadno hawlgallada iyo meesha ugu sarreysa anshaxa annaga oo ilaalinayna oo daryeelna kooxahayaga, ”ayuu yiri Nyaradzo Hoto, oo ah sarkaal Hay'adda Caalamiga ah ee La-dagaallanka Ugaadhsiga ee Zimbabwe.
"Waxaan ku adkaysanaynaa ballanqaadkeenna ah inaan ilaalino dhulka baaxadda leh ee naloo wakiishay oo aan ka ilaalinno kuwa aan iska difaaci karin ugaadhsiga," ayuu Hoto raaciyay.
Joornaalka Caalamiga ah ee Aagagga Ilaalinta iyo Ilaalinta ayaa ogaaday in 78.5% waddamada Afrika ee la daraaseeyay ay wariyeen in COVID-19 ay saameyn ku yeelatay awoodda ay u leeyihiin inay la socdaan ganacsiga duurjoogta sharci-darrada ah, boqolkiiba 53na waxay soo sheegeen saamayn aad u sarreysa oo COVID-19 ah oo ku aaddan awoodda yareynta colaadda dadka iyo duur-joogta.
Edwin Kinyanjui, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan jaaliyadda duurjoogta ee Mount Kenya Trust ee Kenya, ayaa sheegay in loo baahan yahay in ilaaliyayaashu ay feejignaan dheeri ah muujiyaan sannadkii la soo dhaafay.
“Dhaqdhaqaaqa sharci darrada ah ee ay sabab u tahay luminta dakhliga baahsan ayaa sii kordhaya oo inta ay la dagaallamayaan hawshan, ilaaliyayaashu waxay halis ugu jiraan inay qaadaan COVID-19,” ayuu yiri Kinyanjui.
“Hababka ugaadhsiga ayaa sidoo kale si isa soo taraysa u noqonaya kuwo casri ah, nidaamka caddaaladduna aad buu u fidsan yahay. Waan sii wadnaa sababtoo ah waxaan fahamsanahay in waxa aan u halgameyno ay naga weyn yihiin, ”ayuu yiri Kinyanjui.
Muhiimka ah maalgelinta dalxiiska duurjoogta sidoo kale waxay ku jirtay dhibaato ka dhalatay masiibada. Afhayeen u hadlay Frankfurt Zoological Society ayaa sheegay in saameynta COVID-19 laga dareemayo Beerta Qaranka ee Nsumbu ee Zambia.
"Dalxiiskan oo yaraaday wuxuu saameeyay shaqooyinkii iyo hab -nololeedyadii la xiriiray wuxuuna bixiyay caqabad ku xirnaanta qiimaha dabeecadda iyo qiimaha nolosha aadanaha," ayay tiri bulshada.
Charity Rhino Ark, oo caawisa Beerta Qaranka Aberdares ee Kenya, ayaa sheegtay in dakhligii dalxiiska ee Adeegyada Duurjoogta Kenya uu hoos u dhacay 96%, taas oo dhalisay dhimista miisaaniyadda ee barnaamijyada duurjoogta dawladda iyo amniga kaynta.
Si wax looga qabto dhibaatada, in ka badan 150 kooxood oo ilaaliyayaal ah ayaa ka qeyb qaadanaya 2021-ka Duurjoogta Duurjoogta, caqabado is-daba-joog ah oo xagga maskaxda iyo jirka ah oo dhammaaday 18-kii Sebtember tartan 21-kiilomitir ah oo ka socda dhulka kala duwan ee adag ee aagagga la ilaaliyo Afrika. .
Lacagaha la uruuriyay ayaa dabooli doona kharashaadka hawlgalka ugu yaraan 5,000 oo ilaaliyayaal ah, taas oo awood u siinaysa inay siiyaan qoysaskooda iyo inay ilaaliyaan bulshooyinka iyo duurjoogta ku nool qaar ka mid ah meelaha ugu nugul Afrika.
“Rangers -ku waa halbawlaha dadaalladeena ilaalinta waxayna si fudud u yihiin kuwo aad u qaali ah inaan luminno,” ayay tiri Judi Wakhungu, oo ah safiirka Kenya u fadhiya Faransiiska, Portugal, Serbia, Monaco, iyo Qudus.
Ololaha ka-hortagga ugaadhsiga ee Afrika ayaa ka socda maaliyad-yari aad u daran oo ay sababtay ka-soo-bixitaankii dalxiisayaasha oo yaraaday intii lagu jiray aafada.
Tansaaniya, oo ka mid ah waddamada Afrika ee hodanka ku ah duur-joogta, waxaa la soo sheegay in wadar ahaan 33,386 ugaadhsadeyaal ah lagu xiray 5-tii sano ee la soo dhaafay taas oo ay ugu wacan tahay ololaha ka-hortagga ugaarsiga ee uu bilaabay Guddiga Qaran ee Ka-hortagga Ugaarsiga (NTAP).
Isla muddadaas, waxaa la qabtay 2,533 hub; wadar ahaan 5,253 kiis ayaa maxkamadda la geeyay; waxaana la soo gabagabeeyay 914 taasoo horseeday in xabsiga la dhigo 1,600 oo qof.
Degmada Madadaalada ee Toronto ayaa soo dhaweysay ...
Kani waa kan: Alitalia waxay ka duushay duulimaadkeedii ugu dambeeyay
CNN Jacaylka Cusub ee Samsung: Wayna bixisaa!
Halyeey Dalxiis oo cusub ayaa ka soo baxay Albania
Jamaica ayaa ku guuleysatay Abaalmarinta Socdaalka Adduunka ee 2021